အခမဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, သွားဖုံး & Lozenges - 802Quits
ပင်မစာမျက်နှာ » ဗားမောင့် » ငါဖြတ်ချင်တယ် » ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အကူအညီရယူပါ » အခမဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, သွားဖုံး & Lozenges
အခမဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, သွားဖုံးနှင့် LOZENGES
နုတ်ထွက်ခြင်းတိုင်းသည်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာသည်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေသည်ဟူသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Quit Coach နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေနီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံး (NRT) ဟုလည်းလူသိများသည့်ဆေးဖြတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပိုများစေသည်။ တကယ်တော့၊ သင်ထွက်ခွာသွားသည့်အခါသင်၏ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းများများပြားလာသည်။
ဆေးဖြတ်ဆေးကိုစိတ်ကြိုက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနည်းပြမှအကူအညီနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ ဗားမောင့်လက်တွဲပါ or ဖုန်းဖြင့်အကူအညီကိုဖြတ်ပါ
အသုံးပြုခြင်းဖြင့်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးများကိုပေါင်းစပ်ပါ တစ်ချိန်တည်းမှာဆေးဖြတ်2ပုံစံများ။ ကြာရှည်စွာပြုခြင်း (patch) နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော (သွားဖုံးသို့မဟုတ် lozenge) နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအားပေးသည်။ လေ့လာကြည့်ပါ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Quit ဆေးဝါးများကိုပေါင်းစပ်ပြီး.
အခမဲ့နီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ သွားဖုံးများနှင့်ဆေးကြောဆေးများကိုမှာယူရန် 802Quit ၏အွန်လိုင်းပေါ်တယ်ကိုသွားပါ
အခမဲ့နီကိုတင်းအချပ်များ, သွားဖုံး & Lozenges နှင့်အခြား Quit ဆေးဝါးများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ
အသုံးအများဆုံးဆေးဖြတ်ဆေး၏မိသားစုသည် patchs, gum နှင့် lozenges ကဲ့သို့နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးဖြစ်သည်။ 802Quits သည်ဤအခမဲ့ဆေးလိပ်ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသူများကိုသင်၏အိမ်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်သည်။ အခမဲ့ဆေးဖြတ်ဆေးများမှာယူပြီး ၁၀ ရက်အတွင်းရောက်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများလက်ခံရန်ရက်မ ၀ င်မီရက် ၃၀ အတွင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ရက်စွဲသာရှိလျှင်သင်၏ဆေးလိပ်ဖြတ်မည့်နေ့မတိုင်မီအခမဲ့နီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများရနိုင်သည်။
802Quits မှနီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ သွားဖုံးနှင့်အဆိပ်အတောက်များကိုအခမဲ့အခမဲ့မှာယူသည်သာမကသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူသည်အခြားဆေးဝါးအမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆေးဝါးများကိုအတူတကွအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်သင့်အားဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နှင့်အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ပံ့ပိုးသူနှင့်စကားပြောပါ
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိနိုင်သည်။ ဤကဏ္inမှသတင်းအချက်အလက်များသည်ဆေးလိပ်၊ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများအားသင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကူညီသည့်ထုတ်ကုန်များကိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အရေပြားပေါ်တွင်ချထားပါ။ ကြာရှည်ခံလိုသောဆန္ဒများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနီကိုတင်းသည်သင်၏သွေးစီးထဲသို့ထုတ်လွှတ်သည်။ ဘုံတံဆိပ်နာမည်Nicoderm® patch ကိုဖြစ်ပါတယ်။
နီကိုတင်းလွှတ်ပေးရန်ဝါး။ မတရားမှုကိုလျှော့ချရန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်း။ သင့်သောက်သုံးသောပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ဘုံတံဆိပ်နာမည်Nicorette®သွားဖုံး။
ခက်ခဲတဲ့သကြားလုံးများကဲ့သို့ပါးစပ်၌နေရာချ။ နီကိုတင်း lozenges သည်ဝါးခြင်းမရှိဘဲသွားဖုံး၏အလားတူအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်နီကိုတင်းအစာအိမ်နှင့်သွားဖုံးသို့မဟုတ်နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုစွန့်ခွာလိုပါက၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်း ၃ ခု၊ သင်မည်မျှရပြီးမည်မျှကုန်ကျသည်စသည်တို့ရှိသည်။
1.802Quits နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ရက်သတ္တပတ် ၂ မှ ၈ ပတ်အကြာတွင်အခမဲ့နီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ PLUS သွားဖုံးသို့မဟုတ် lozenges များကိုရယူပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်.
2.အကယ်၍ သင့်တွင် Medicaid နှင့်ဆေးညွှန်းတစ်ခုရှိပါကနီကိုတင်းအချပ်များနှင့်သွားဖုံးများသို့မဟုတ် lozenges များကိုအကန့်အသတ်မရှိပိုမိုနှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ် ၁၆ ပတ်အလိုမလိုအပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသင့်အတွက်အခမဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။
3.သင့်တွင်အခြားကျန်းမာရေးအာမခံရှိပါကဆေးညွှန်းနှင့်အခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့စျေး NRT ကိုသင်ရနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။
တစ် ဦး mouthpiece ပူးတွဲသည့်အရာတစ်ခု။ ရှူရှိုက်မိပါကနီကိုတင်းပမာဏကိုထုတ်လွှတ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်တိုခြင်းကဲ့သို့သောစွဲနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ သွားဖုံးနှင့် lozenges ကဲ့သို့သောနီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးထုတ်ကုန်များနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
စွဲမက်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ နီကိုတင်းမပါဝင်ပါ။ ဆေးရွက်ကြီးမှစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အခြားဆေးများနှင့်မပေါင်းသင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ကျရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ဆေးဝါးသောက်နေလျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အထက်ပါပစ္စည်းများကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်အချက်အလက်အတွက်သင်၏ဆေးဆိုင်နှင့်စစ်ဆေးပါ။ Medicaid သည် ၂၄ ပတ်ကြာ Zyban အထိဖုံးအုပ်ထားသည်® နှင့် Chantix®.
ဆေးဖြတ်လိုက်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်လူအနည်းငယ် (၅% အောက်) သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့်ဆေးဖြတ်ခြင်းကိုရပ်ရန်လိုသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သင်နီကိုတင်း patch vs. lozenges vs. သွားဖုံးစဉ်းစားနေပါသလား အအေးကြက်ဆင်သွားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ သွားဖုံးနှင့်အစာအဆိပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးရွက်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်နိုင်သည့်သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးများကဲ့သို့ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သွားဖုံး (သို့) lozenges နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသုတ်ဆေးများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အလေးသာမှုများကိုပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နီကိုတင်းသွားဖုံးနှင့်ကွက်လပ်များကိုအတူတကွသုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအဆိပ်များနှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုအတူတကွသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်? ဒီ patch ကနီကိုတင်းကို ၂၄ နာရီပုံမှန်စီးဆင်းစေသဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများမှကြာရှည်စွာသက်သာခြင်း၊ ဤအတောအတွင်းသွားဖုံးသို့မဟုတ် lozenge သည် 24 မိနစ်အတွင်းနီကိုတင်းအနည်းငယ်ကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီးသင့်အားခက်ခဲသောအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်သင်လိုချင်သောဆန္ဒကိုထုတ်ယူစဉ်သင်၏ပါးစပ်ကိုအလုပ်များစေနိုင်သည်။
အတူတူအသုံးပြုခြင်း, patch နှင့်သွားဖုံးသို့မဟုတ် lozenge တစ် ဦး တည်းအသုံးပြုသောအခါသူတို့တတ်နိုင်သမျှထက်နီကိုတင်းတပ်မက်ခြင်းမှအများကြီးပိုကောင်းသက်သာရာပေးနိုင်သည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်မကြာမီသင်ဆေးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းဤရောဂါလက္ခဏာများသည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးမကြာမီပျောက်ကွယ်သွားသင့်သည်။ ထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများသည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားသည်။ အသုံးများသောအချို့မှာ -
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) ဝမ်းနည်းခြင်း
စိတ်တို, grouchy သို့မဟုတ် On- အစွန်းခံစားရတယ်
နာမငြိမ်ခြင်းနှင့် jumpy ခံစားရတယ်
သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကူညီရန်နည်းလမ်းသုံးမျိုး - 802Quits - ဖုန်း၊ လူနှင့်အွန်လိုင်းတို့ဖြစ်သည်။